GridMaster စျေး - အွန်လိုင်း GRM ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို GridMaster (GRM)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ GridMaster (GRM) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ GridMaster ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ GridMaster တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
GridMaster များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
GridMasterGRM သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0168GridMasterGRM သို့ ယူရိုEUR€0.0143GridMasterGRM သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0129GridMasterGRM သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0154GridMasterGRM သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.153GridMasterGRM သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.107GridMasterGRM သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.377GridMasterGRM သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0632GridMasterGRM သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0226GridMasterGRM သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0235GridMasterGRM သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.378GridMasterGRM သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.131GridMasterGRM သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0914GridMasterGRM သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.26GridMasterGRM သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.2.83GridMasterGRM သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0231GridMasterGRM သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0255GridMasterGRM သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.526GridMasterGRM သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.117GridMasterGRM သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.79GridMasterGRM သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩20.04GridMasterGRM သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦6.38GridMasterGRM သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.24GridMasterGRM သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.466
GridMasterGRM သို့ BitcoinBTC0.000001 GridMasterGRM သို့ EthereumETH0.00005 GridMasterGRM သို့ LitecoinLTC0.000297 GridMasterGRM သို့ DigitalCashDASH0.000178 GridMasterGRM သို့ MoneroXMR0.000183 GridMasterGRM သို့ NxtNXT1.22 GridMasterGRM သို့ Ethereum ClassicETC0.00248 GridMasterGRM သို့ DogecoinDOGE4.87 GridMasterGRM သို့ ZCashZEC0.000185 GridMasterGRM သို့ BitsharesBTS0.661 GridMasterGRM သို့ DigiByteDGB0.63 GridMasterGRM သို့ RippleXRP0.0585 GridMasterGRM သို့ BitcoinDarkBTCD0.000581 GridMasterGRM သို့ PeerCoinPPC0.0567 GridMasterGRM သို့ CraigsCoinCRAIG7.68 GridMasterGRM သို့ BitstakeXBS0.719 GridMasterGRM သို့ PayCoinXPY0.294 GridMasterGRM သို့ ProsperCoinPRC2.12 GridMasterGRM သို့ YbCoinYBC0.000009 GridMasterGRM သို့ DarkKushDANK5.41 GridMasterGRM သို့ GiveCoinGIVE36.49 GridMasterGRM သို့ KoboCoinKOBO3.98 GridMasterGRM သို့ DarkTokenDT0.0155 GridMasterGRM သို့ CETUS CoinCETI48.65